Kutheni le nto iPlanethi yeNeptune ibaluleke kangaka kwi-Astrology? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Kutheni le nto iPlanethi yeNeptune ibaluleke kangaka kwi-Astrology?
Ukusuka kwiMythology yamaRoma ukuya kwiNgxilimbela yeGesi, kuninzi kakhulu kunokudibana nabo xa kufikwa kwiNeptune! Wazi kangakanani ngesijikelezi-langa 'esiNgcaciso esikhulu esiBlue'?
Ngokuqhelekileyo eyaziwa ngokuba yiBig Blue Planet, iNeptune idlala indima ebalulekileyo kwihlabathi lokuvumisa ngeenkwenkwezi kwaye inefuthe kuwe yonke imihla, kuxhomekeke kwindawo ekuyo kwitshathi yakho yokuzalwa. Ngaba uyafuna ukufunda ngakumbi ngeNeptune? Owethu umvumisi ngeenkwenkwezi, u-S T, uphalaza ezona mfihlelo zinkulu zesi sijikelezi-langa sinomdla, ukusuka kumfuziselo ukuya kutsho kwiintsomi!
Ifuzisela ntoni iNeptune?
Nge-orbit ye-4.495 yeebhiliyoni zeekhilomitha, enomkhenkce Iplanethi iNeptune ikude kakhulu ilanga (isaphulelo kwiPluto). Yalo ububanzi buphindwe kane kunoMhlaba (iikhilomitha ezingama-49,500 ) , kwaye kuthatha Iminyaka eyi-165 ukugqiba i-orbit eyodwa yeLanga . INeptune yiplanethi enegesi, kwaye inakho ubunzima obuphindwe kayi-17 kunoboMhlaba , nangona iquka phantse yonke i-hydrogen kunye ne-helium.
Ngokomfuziselo kwintsomi, uNeptune waziwa njengoThixo woLwandle
Eyaziwa ngokuba nguPoseidon kwiintsomi zamaGrike, isithixo samaRoma UNeptune nguthixo wolwandle kunye nabaqhubi . Bobabini ngunyana kaISaturn, kunye nomntakwabo Jupiter kunye nePluto. Ngokwentsomi, USaturn wayidla iNeptune kuba wayenomona ngesakhono , kodwa wanyanzelwa ukuba abuyele kuye emva kwedabi phakathi kweSaturn kunye neJupiter. Ngenxa yoko, uSaturn walahlekelwa ukulawula ihlabathi kwaye kwaba njalo yahlula phakathi kukaNeptune nabazalwana bakhe ababini -kunye INeptune ithatha ubunini bolwandle .
INeptune iboniswe nge iinwele ezinde, ezijikajikayo kunye neendevu kwintsomi. Ubonwa ukuba ubambe i-trident enamandla kwaye uhamba elwandle inqwelo yokulwa, iqhutywa ngamahashe olwandle .
- Funda ngeziphumo ze INeptune ibuyisela umva -
Izizathu zokuba kutheni iNeptune ibaluleke kakhulu ekuvumiseni ngeenkwenkwezi: Ngumzisi weemvakalelo
INeptune yiplanethi leyo ilawula amaphupha ethu, iimbono, iinkolelo zethu kwaye iyasinceda ukuba samkele okanye silumkise iimvakalelo zethu . Iyakwazi ukusenza ukuba samkele ngakumbi okanye ngaphantsi kweemvakalelo zabanye ngokwendawo yayo kunye nobudlelwane nezinye iiplanethi.
Xa ukwimeko embi, kunokubangela ukuxhomekeka okungenampilo, okufana nokuba likhoboka lotywala okanye iziyobisi . Xa uthelekisa nezinye izijikelezi-langa, icotha ngakumbi, intsingiselo yalo unomkhwa wokuhlala kwiimpawu zezodiac ixesha elide kwaye ibe neempembelelo zayo kangangeminyaka ekugqibeleni.
Ziziphumo zokuvumisa ngeenkwenkwezi
Iziphumo ezilungileyo zeNeptune zibandakanya intuition, isisa, uthando, ithemba, umbono, kunye nobuntu
Imiphumo emibi Ibandakanya inkohliso, ukuthabatheka, ukuba sesichengeni, ukuphambana, ukungazithembi, kunye nokulahleka kwesazisi
Kwinqanaba lokomfuziselo, le planethi imele intelekelelo, iphupha, inkolo, imibongo, inkolo, amanzi, uluntu, kunye neemfihlakalo
Izinto ezintathu malunga nalo mhlaba
Ixesha le-Orbital (ixesha elithathayo ukuba iNeptune ijikeleze iLanga): Iminyaka eyi-164 kunye neentsuku ezingama-280
Imisebenzi yomzimba edibeneyo: Iimvakalelo, ukuphupha
Intsimbi edityanisiweyo: Neptune
>>> Ke, nantso ke, ngoku uyingcaphephe eNeptune! Oko kuthethiweyo, kusekho okuninzi ekufuneka kufundwe malunga nesixokelelwano sethu selanga, ngakumbi xa kufikwa ekwaziniyeyiphi iplanethi elawula phezu kophawu lwakho, ngoko vula ingqondo yakho kwaye ubukele isibhakabhaka ebusuku siphila phambi kwamehlo akho!
Lapis Lazuli: Intsingiselo, Imvelaphi kunye Namandla Eli Litye
IHoroscope yeQhude ngo-2021: Unyaka oMhle kakhulu